घास काट्न गएकी आमा भर्खरै भारतमा फेला, कस्ले लग्यो ? ९ बर्सिय छोरीको आमालाई यस्तो सन्देश - SudurSanchar
गुल्मी जिल्लाको इश्मा गाउपालिका बुल्ममा बसोबास गर्दै आएका चार जनाको परिवार यो समय बि’चल्लीमा परेको छ। भदौ ८ गते दिउसोको १:०० बजेतिर घास का’टेर आउछु भन्दै घरबाट निस्केकी उनी आज २० दिन सम्म घर फर्केकी छैनन ।२८ बर्षीय धनी कुमारी कुमाल त्यो दिन देखि सम्पर्क बि’हीन भएकी हुन।घास काट्न जादा एक जोर कपडा लगेर हिडेकी थिइन।
आफुलाई भन्दा बढी माया गर्ने श्रीमान यो जुनीमा भेट्नु भनेको ‘देवता’ पाए जस्तै हो। उनले आफ्नी श्रीमतीलाई निकै माया गर्दो रहेछन। उनका एक छोरा र एक छोरी रहेका छन।निकै रो’ही रहेकी छिन उनकी नै बर्षिय बालिका सानो उमेर ठुलो जिम्मेबारी काधमा बोकेर हिडेकी उनको कुराले कस्को मन नरो’ला .?? उनीहरुले आज भन्दा करिब १२ बर्ष अगाडी प्रेम बिबाह गरेका थिए ।
श्रीमतीलाई रानी सरह राखेका उनले एक्का’सी श्रीमती ह’राएको खबर आउदा स’हन नसक्ने ब’ज्रपा’त परेको बताउछन। मलेशियामा दुइ बर्ष बिताएका उनले तेहा राम्रो कमाइ नभए पछि कतारमा पाच बर्ष बिताएका थिए।श्रीमतीलाई सबै पैसा पठाएका उनको साथमा न त पैसा रह्यो नत श्रीमती,तिमी जहा छै फर्केर आउ तिमीलाई मैले कहिले दु;ख दिने छैन।
नौ बर्षिय गृष्मा कुमालले घरको पुरा काम गर्छीन पानी बोक्ने,खाना बनाउने,सानो भाइको हेरचाहा गर्ने ,सबै कीम गरेर बसेकी छन। उनले कक्षा चारमा पढ्दै थिइन आमाको खबर नआए पछि घरमा बस्दै आएकी उनीले आफुमा पढ्ने रहर भएको बताउछीन।उनको आखामा आशु देखि रहदा मेरो पनि आखामा आँशु रोकिएन। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।